Estadísticas en YouTube para el video Barashada Luuqada English-ka oo afsomali ah adigo gurigaag iyo goobtaada shaqo joogo - NoxInfluencer
waxkabaro 56.6K Suscriptores 152 Videos 769.85K Vistas totales 2018-10-21 PublicadoDatos actualizados en 2021-09-08
Valor estimado $ 2.07K - $ 3.74K
Ku so dhawada barashada #luuqada #english ka oo #afsomali ah. Koorsadan waxaa ku baran doonta qeybaha kala duwan ee luuqada sida barashada english bilow ah mid dhex dhexaad ah iyo mid heer sare ah.
Dhamaan casharada afsomali ayee ku baxayaan markii laga reebo qeybta ugu sareyso oo ku bixi doonto english to english.
Koorsadaan oo dhamestiran waxa ka helesa websiteka #waxkabaro.net.
Si aad isga soo diwan galiso fadlan soo dajiso appkeenshaka waxkabaro adigo play storeka ka raadinayo erayga waxkabaro.
Halkaan aya ka heli karta casharo kale oo English ah
Koorsoyinka kale ee websiteka ku jiro waxaa ka mid ah:
=)Quickbooks Professional pro- Barashada Quickbooks- si fudud ku naqo Computerized Accountant
=) English Inside Out: Si fudud ku baro ku hadalka luuqada Englishka
=) Barashada Luuqada Carabiga: Si fudud ku baro ku hadalka luuqada Carabiga
=)Architectural Home Design with Archicad: Barashada Naqshadeynta Guryaha
=)Qaabka Onlineka Lacag Looga Looga Abuuro: Baro Qaabka lacag looga abuuro onlineka
=) ULTIMATE PHOTOSHOP COURSE: Barashada graphic Designka
Iyo koorsoyin kale oo badan Fadlan booqo websiteka waxkabaro.net
Nagala soo soco Baraha Bulshada:
Booqo websiteka: https://waxkabaro.page.link/jdF1
Subscribe dheh youtubeka: https://www.youtube.com/c/waxkabaro
Facebook like Saar: https://www.facebook.com/waxkabaroWeb/
Instagram-kana follow dheh:https://www.instagram.com/waxkabaro/